MRB ကြိုးမဲ့သူများသည် HPC005 ကိုတန်ပြန်သည်
IR Beam ကောင်တာ
ခရီးသည်ကောင်တာ / MDVR
MRB လူများကင်မရာ HPC008 ရေတွက်
MRB AI ယာဉ်ရေတွက်စနစ် HPC199
MRC ဘတ်စ်ကားအတွက် MRB အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေအတွက်
MRB wifi footfall ကောင်တာ HPC015S
MRB တံခါးပေါက်မှလူများသည် HPC001 ကိုတန်ပြန်သည်
MRB ESL ဈေးနှုန်းစနစ် HL290
MRB ESL ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဒါက ကြိုးမဲ့ကလူတန်ပြန် WIFI မပါပဲကူးယူနိုင်တယ် လူကောင်တာ မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများကောင်တာအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏ခေတ်တွင်, ပြည်သူ့တန်ပြန်ဒေတာကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေသည်နှင့်စီးပွားရေးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် လူများတန်ပြန် စာကြည့်တိုက်များ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းအရောင်းဆိုင်များ၊ အခွက်တဆယ်စျေးကွက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းခန်းမများ၊ အစိုးရရုံးများ၊ စူပါမားကက်များ၊ လူများတန်ပြန်, လူများတန်ပြန်၏ MRB သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်၏ထက်ဝက်သာရှိသည်။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်၊ နှစ်လမ်းတွက်ချက်ခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ င်ထွက်ခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်ကို ဦး တည်သည်ကိုကောင်းစွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်တံခါးသည်မီတာ ၄၀၊ ကြိုးမဲ့ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးသည်ကြိုးမဲ့ရောက်တာထက်များစွာပိုသည်။ပြည်သူ့တန်ပြန် lithium-ion ဘက်ထရီများကို power supply အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၂ နှစ်ခန့်ကြာရှည်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည် ဝင်ရိုးကလူတန်ပြန်.
၁။ ဒီဇိုင်း လူများတန်ပြန်ရိုးရှင်းပြီးရက်ရောသည်။ ကောင်တာအသစ်၏သွင်ပြင်ဒီဇိုင်းသည် ပို၍ ကျစ်လစ်သည်၊ ဝက်အူတပ်ဆင်ခြင်း၊
၂။ သက်တမ်းပိုရှည်သော၊ လူများတန်ပြန် AA (နံပါတ် ၅) ကို သုံး၍ ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်တစ်နှစ်ခွဲကြာမြင့်မည်၊ 3.6V ပမာဏကြီးမားသော lithium battery၊ ဗို့အား 1.5-3.6V၊
3. ပေါ်ရှိ LCD display ကိုတိုးမြှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကလူကောင်တာ, အဝင်နှင့်ထွက်ဒေတာတစ်ချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါသည်။
၏ 4. ဒေတာများကိုထုတ်လွှင့် လူများတန်ပြန်တည်ငြိမ်သည်။ ခရီးသည်စီးကောင်တာမှဒေတာလက်ခံသူထံပေးပို့သောအချက်အလက်များသည်စာဝှက်ထားသောဒေတာအားလုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြားကိရိယာများနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုလုံခြုံသည်။
၅။ အလင်း၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါ လူများတန်ပြန် ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်း၏ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရေတွက်အမှားဖြေရှင်းပါ။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာပေါ်ရှိ LED ကြော်ငြာမျက်နှာပြင်မှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိသောအချက်အလက်များကို အနီအောက်ရောင်ခြည်ကလူကောင်တာအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကို အသုံးပြု၍ ပရိုတိုကောမှတဆင့် LED ကြော်ငြာမျက်နှာပြင်သို့စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
၇ ပြည်သူ့တန်ပြန် ဖန်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များမှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန်ဖန်ကိုထိုးဖောက်နိုင်သည်
၈။ ၀ င်လာတဲ့အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေပြီးတာနဲ့ ပြည်သူ့တန်ပြန် လူများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများသည် ၅ စက္ကန့်ကျော်ကြာပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ပြသမှုသည်ပိတ်ဆို့ထားသောပုံစံကိုပြလိမ့်မည်။ RX အလယ်တွင်ရှိ LED အလင်းသည်အဆီးအတားရှိသည်ကိုညွှန်ပြရန်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့်ဒေတာဒေတာလက်ခံသူထံသတင်းပို့လိမ့်မည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ဆက်စပ်မှတ်တမ်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များလည်းရှိလိမ့်မည်လူများတန်ပြန်.
အမျိုးမျိုးသောစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖောက်သည်၏ LOGO ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် လူများတန်ပြန် ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်လက်ဆောင်သေတ္တာ။
10.MRB လူများတန်ပြန် ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေး: 1-40 မီတာရှည်လျားသောအကွာအဝေးတပ်ဆင်ခြင်းအထိ။
၁၁ လူများတန်ပြန် တဆင့် Occupancy ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ဆော့ဝဲ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ Sensor များအတွက် 1.5v / 3.6v AA သို့မဟုတ် lithium battery; DC အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Adapter / USB
အတိုင်းအတာ 2.5 x 2.3 x 0.98 "
Operating အပူချိန် -10 ~ 40 ℃
အရောင် အဖြူ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်
တပ်ဆင်ခြင်း စတိုးဆိုင်အမျိုးမျိုး၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းအားလုံး
လက်ခံသူအတွက်လည်ပတ်မှုလက်ရှိ (RX) 180μA
လက်ခံသူအတွက် static state current (RX) 70μA
Transmitter အတွက် Operating Current (TX) 200μA
Transmitter အတွက် Static Current Current (TX) 80μA
Detection Way အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
ရေတွက်လမ်း Straightaway Shot နှင့် Shade ထို့နောက် Count
ဒေတာပေးပို့သူကာလ RX ကနေ DC မှ5မိနစ် - စိတ်ကြိုက်; ချက်ချင်းပင် - software ကိုမှ DC
RF ဂီယာကြိမ်နှုန်း 433MHz, စာဝှက်
ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း RX မှ RF သို့ Transmission၊ DC မှ USB ကြိုးဖြင့်ကွန်ပျူတာသို့၊
သီးခြားဆော့ဝဲ signal store အတွက် windows 2003 အထက်
ကွန်ယက် software ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များအတွက်၊ 2003 2003 နှင့် SQL2005 အထက်တွင်တည်ရှိသည်။
အမြင့် 1.2 မီတာ, မျက်နှာမှမျက်နှာ
Fixed Way ဝက်အူသို့မဟုတ်စတစ်ကာများ
အာရုံခံကိရိယာမှသည် DC အထိ ≤40မီတာ
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် လူများတန်ပြန်, 2D, 3D, AI အ လူများတန်ပြန်, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ကျေးဇူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အသင့်တော်ဆုံးအကြံပြုလိမ့်မည် လူများတန်ပြန် 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
ရှေ့သို့ MRB ကြိုးမဲ့ဒီဂျစ်တယ်သမားများသည် HPC005U ကိုတန်ပြန်သည်
နောက်တစ်ခု: MRB အလုပ်အကိုင် HPC စီးရီးတန်ပြန်
Infrared Beam ကောင်တာ
လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက် MRB လက်လီရောင်းဝယ်ရေးကောင်တာ ...
MRB အလိုအလျောက်အသုံးပြုသူများသည် HPC005S ကိုတန်ပြန်သည်
လက်လီ HPC015U အတွက် MRB USB ရေတွက်စက်
MRB ကြိုးမဲ့ဒီဂျစ်တယ်သမားများသည် HPC005U ကိုတန်ပြန်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံနှင့်ဒေသ ၁၀၀ ကျော်သို့ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပသို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုဖြင့် MRB သည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လိပ္စာ: China, Shanghai, Putuo ခရိုင်၊ အခန်း ၈၁၈-၈၂၀၊ အဆောက်အ ဦး B၊ St. NOAH၊ အမှတ် ၁၇၅၉၊ Jinshajiang လမ်း။
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-52353905
ဖက်စ်: + 86-21-52353906